Gilalite quartz waxaa loo yaqaanaa medusa quartz ama Paraiba quartz - fiidiyow
Ka iibso dukaankayaga 'gilalite quartz dabiiciga'
Gilalite quartz waxaa badanaa loo yaqaanaa medusa quartz ama Parazba Parazba sababta oo ah midabka waxyaabaha ku jira sidoo kale wuxuu noqdaa aagga Brazil halkaas oo lagu qodayo
Gilalite waa macdan naxaas ah oo ay ku jirto maadada kimikada ah ee Cu5Si6O17 · 7.
Waxay u dhacdaa marxalad dib-u-habayn metamorphic ah oo ku jirta kaydinta silc-silicate iyo sulfide skarn. Waxay u dhacdaa sida buuxinta jabka iyo kala goynta la xidhiidha kiristaalo diopside. Waxaa caadi ahaan laga helaa qaab ah spherules of fiber radial.
Waxaa markii ugu horreysay loo sharxay dhacdo ka dhacday miinada macdanta birta ee Kirismaska ​​ee Gila County, Arizona 1980 iyo weelka loo yaqaan 'macach apachite'. Waxay ka heshay magaceeda deegaankan. Waxaa sidoo kale laga soo sheegay Degmadda Goodsprings, Degmada Clark, Nevada; Juazeiro do Norte, Ceara State, Brazil iyo goob slag ah oo ku taal Degmada Lavrion, Attica, Griiga.
Quartz wuxuu ku yaalaa laba qaab, z-quartz caadi ah iyo temperature-quartz-heer-sare ah, oo labaduba ay yihiin firfircoon. Beddelka ka yimid α-quartz ilaa β-quartz wuxuu si kedis ah ugu dhacaa 573 ° C. Maaddaama isbeddelka uu la socdo isbeddel weyn oo mugga ah, waxay si fudud u horseedi kartaa jabitaanka jaranjarada ama dhagaxyada maraya heerkulka heerkan.